एसम सेवा समाजले भन्यो-दुखमा हुनुहुन्छ…….?- आउनुस हामी साथमा छौं - Nepal's No.1 News portal
एसम सेवा समाजले भन्यो-दुखमा हुनुहुन्छ…….?- आउनुस हामी साथमा छौं
-बिभिन्न सामाजिक काम गर्दै आएको एसम सेवा समाज ओखलढुङ्गा–काठमाण्डौले कोभिड महामारीको समयमा लगाईएको लक्डाउनलाई लक्षित गर्दै विषम परिस्थितिमा परेका काठमाण्डुमा रहनुहुने एसम बासी लगायतलाई आफ्नो समस्या समाधानको लागि सस्थामा या सस्थाका कुनै पनि व्यक्ति साथै वडा प्रतिनिधिसंग सिधा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ।
सस्थाका अधक्ष्य समेत रहनुभएका समाजसेवी सुर्य बहादुर पाण्डेले सामाजिक अभियन्ता,राजनैतिक व्यक्ति लगायतलाई आफ्नो समाजका दुखमा परेका कुनै पनि व्यक्तिलाई सस्थासंग समन्वय गराईदिन पनि अनुरोध गर्नुभएको छ। सस्थाले यो दुखको अवस्थामा पर्नुहुने सबैमा आर्थिक भौतिक सहयोग गर्ने र सस्थागत सहयोग गर्न चाहने कुनै पनि सस्था साथै व्यक्तिलाई सार्बजनिक अनुरोध समेत गर्नुभएको छ।
यता सरकारले कुनै विकल्प प्रस्तुत नगरी लगातार निषेधाज्ञा जारी गर्दा त्यसको प्रत्यक्षमार गरीब मजदुर वर्गमा परेको छ। निषेधाज्ञाले गर्दा उनीहरुको रोजीरोटीमा ठुलो समस्या पैदा भएको छ। सरकार एकोहोरो निषेधाज्ञाको घोषणा मात्र गर्छ तर जनताको पक्षमा कुनै राहत प्याकेज घोषणा समेत गरेको छैन ।
गरीब जनताको रोजीरोटीको विषयमा संवेदनहीन बनेको सरकार बिचौलिया र कमिसनखोरको घेरामा रमाईरहेको छ। निषेधाज्ञा जनताको सुरक्षाको लागि कि माफियाको सहजताको लागि जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। श्रमजिवी भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको छ । राजधानीमा बसोवास गर्ने लाखौ श्रमजिवीको रोजीरोटी खोस्ने निषेधाज्ञा तत्काल हटाएर विकल्प दिन चौतर्फी आवाज उठ्न थालेको छ । अब पनि निषेधाज्ञा थप गरे जनस्तरमा त्यसको प्रतिरोध हुने संकेत देखिन थालेको छ।